Stocker Kursi - Joornaalka Naqshadeynta
Kursi Kaydku waa isku dhac ka dhexeeya saxarada iyo kursi. Kuraasta dabacsan ee alwaaxyada furan ayaa ku habboon dhismayaasha gaarka loo leeyahay iyo kuwa ku meel gaarka ah. Qaabkeeda muujinta ayaa hoosta ka xariiqaya quruxda alwaaxyada deegaanka. Qaabdhismeedka qaab dhismeedka adag iyo dhismaha waxay awood u siineysaa dhumuc ahaan walax ah oo ah 8 mm oo ah 100 boqolkiiba alwaax adag si ay u abuuraan maqaal jilicsan laakiin culeyskiisu yahay 2300 Gramm oo keliya. Dhismaha iskujira ee Stocker wuxuu u oggolaanayaa kaydinta meel bannaan. Isku dhejisan midba midka kale, si fudud ayaa loo keydin karaa iyada oo ay ugu wacan tahay qaabeynta hal-abuurka ah, Stocker ayaa gebi ahaanba lagu riixi karaa miiska hoostiisa.
Magaca mashruuca : Stocker, Magaca naqshadeeyayaasha : Matthias Scherzinger, Magaca macmiilka : FREUDWERK.